DOWNLOAD UMMY VIDEO DOWNLOADER 1.10.0.0 - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
ဂီတမူဝါဒအ VKontakte ပြောင်းလဲနှင့် ဆက်စပ်. , ဒီလူမှုရေးကွန်ယက်မှကို download သီချင်းတွေကိုပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုတွင်အသုံးပြုထားသော browser များကြောင့်သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းရဖို့နေဆဲဖြစ်နိုင်သောသော applications များနေတုန်းပဲရှိပါတယ်။ ဒီဥပမာအနေနဲ့လူမှုကွန်ယက် VK ကနေဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်း, VKSaver ၏ချဲ့ထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
VKSaver သုံးပြီး VKontakte download, ဂီတ
ပေးထားသောလူမှုကွန်ယက်ကနေအပုဒ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ချဲ့ထွင် VKSaver သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာထဲမှာ installed ရမည်ဖြစ်သည်။ Download ပြုလုပ်စေရန်, အောက်က link ကို click လုပ်ပါ။
VKSaver ကို download လုပ်ပါ
ဒါပေမဲ့ဒေါင်းလုပ်ပုဒ်အရှင်ပင်လယ်ဓားပြရန်ပမာဏမှာတူညီခြင်းနှင့်တရားမဝင်ဆိုတာကိုသတိရ။ ဤရွေ့ကားလုပ်ရပ်များ, မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ဒါ VKontakte နှင့်သီချင်းတွေကို free download, အားလုံးနီးပါးလမ်းကိုပိတ်ဆို့။
အဆင့် 1: လျှောက်လွှာ Install
installation ဖိုင် Download လုပ်များနှင့်လျှောက်လွှာ site ပေါ်တွင်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
တပ်ဆင်အောငျမွငျခဲ့လျှင်, browser ကိုလျှောက်လွှာခလုတ်ကို၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့အက္ခရာ 'ခ' နှင့်အတူ icon တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ယင်းနောက် VKontakte စာမျက်နှာပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက်သွားပါ "ကျနော့်ရဲ့ဂီတ" နှင့်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုအပေါ်ကယ်ဖို့စတင်။
အဆင့် 2: VKSaver အသုံးပြုခြင်း
တစ်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းဒေါင်းလုတ်လုပ်သင့်ရဲ့အသံသွင်းများ၏စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောလမ်းကြောင်းကျော်မောက် cursor ရွှေ့ဖို့။ ထို့နောက်သီချင်းခေါင်းစဉ်၏ညာဘက်ချညွှန်ပြနေတဲ့အဖြူရောင်မြှား၏ပုံစံ icon ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပေါ်လာပြတင်းပေါက်အတွက်ဒေါင်းလုပ် icon ကိုနှိပ်ပါ, အနီရောင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒေါင်းလုပ်"။ ဒေါင်းလုဒ် start မပါဘူးဆိုရင်, ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုညွှန်ပြတော်မူသောအောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖတ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်, folder ထဲမှာ file ကိုရှာပါ "ဒေါင်းလုဒ်များ" သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အမည်တူ tab ကို "Menu ကို" ဘရောက်ဇာ။
ထို့ကြောင့်ဘရောက်ဇာကို-based extension ကို VKSaver အသုံးပြု. သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများမရှိဘဲသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုသီချင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: Descargar Ummy Video Downloader Full + Crack Infinito. Rocket (အောက်တိုဘာလ 2019).